Ndị ọkachamara na Semalt - Kedu ka ọrụ ntanetị a na-esi enweta ọnyà n'Intanet?
Ndị ohi na-eme ka ọ dịkwuo mfe ịchịkwa ihe eji eme ka ndị mmadụ nwee ike ịntanetịsite na ịntanetị. Ozugbo ha nwere, ha na-etinye ihe ndị dị n'ime ya ka ọ bụrụ na onye nwe ya amaghị na ọ gafeela. Ọnọdụ dị njọ maka ndị ahụndị na-amaghị mgbe ha na-aga ịghọ ndị na-ahụ maka scams - aqualia thermal serum cijena struje. Ka ọ na-erule afọ 2000, nsogbu ahụ jupụtara ebe nile nke United States nwereịbịa na Ụlọ Ọrụ Mkpesa Mmemme Intanet (IC3). Ihe IC3 na-eme dị ka ụlọ nkpochapụ nke na-enweta ma na-eme mkpesa niileakụkọ metụtara internet.
Onye Nlekọta Ọrụ Ndị Ahịa nke Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, Max Bell, na-enye echiche bara uru banyere aghụghọ aghụghọ na otu esi zere ya.
Intanet dị ka ebe ndị ohi na-egwu egwu
Ebe ọ bụ na weebụ na-eje ozi dịka isi iyi ihe ọmụma, ọ na-eme dị ka ihe ngwọta dị mmandị na-ese ihe ojoro na-ewepụ ndị ha metụtara. Fraud na-ezo aka n'eziokwu eziokwu ma ọ bụ na-ezochi ihe ndị dị mkpa na-eduga ná ndị ahụ metụtaraeme ihe nke ga, n'ikpeazụ, na-efu ha.
Ọbụna ndị na-akpachara anya bụ ndị na-ezu ohi. Skimming bụ usoro ahụna-eji ngwa eletrik arụ ọrụ na-akwadoghị ma weghachite ozi kaadị akwụmụgwọ si n'aka ndị ọrụ mgbe ha nụsịrị ihe. Nkwalite oge bụ mgbe mmadụakpọ onye nwe kaadị ka ọ bụ onye nnọchite ọrụ nke ụlọ ọrụ ma rịọ data onwe onye n'echiche nke imelite data. Ozugbo ndị ohi na-ezu ohinjirimara, ha nwere ike iji ozi ahụ na-eduhie wayo site na ịme ID na-ezighị ezi na aha.
Ndị ọrụ nwere ike ichebe onwe ha site n'iji akwụkwọ ozi na ụgwọ ndị ha na-adịghị mkpa.Tinye igodo nchedo ozi ịntanetị onwe. Ọ bụrụ na mmadụ na-atụ egwu kaadị akwụmụgwọ kaadị akwụmụgwọ, ha kwesịrị ịhọrọ ịkwụ ụgwọ iji ego kama. Akwụsịlaozi nkeonwe n'agbanyeghị ọnọdụ.
Ichefu ma ọ bụ kaadị ịchọrọ ezuru ohi nwere ike ịpụta na ikpe ndị aghụghọ. Ndị aghụghọ na-aga n'ihughọọ ọkaibe dị ka ikpe nke 2004, bụ ebe ọnụahịa dị nde $ 30 na-akwụ ụgwọ mkpuchi a na-akwụghị ụgwọ. Ngwakọta aghụghọ nyocha nwere ikesitere na telemarketing, ozi ịntanetị spam, ma ọ bụ ndị ọrụ arụ ọrụ. Ndị nke a nwere ike ịmepụta ụzọ na-eduhie eduhie na ihe ndekọ nke ọrịa..
Ndị mmadụ kwesịrị idebe akwụkwọ ndekọ ahụike ha, ozi mkpuchi, na ndị ọzọna-ede akwụkwọ site n'aka ndị ohi. Ọnụ ọgụgụ mkpuchi mkpuchi niile niile na-ejighị ya mkpa ịkwado. Ndị ọrịa kwesịrị izere ịbanye na uwe blanketnkwenye mkpuchi. Ha kwesịrị ịma ego ole ha ga-akwụ ụgwọ n'akpa ha tupu oge eruo.
Ịma Ọkwa ka ị belata mgbanwe
Nkọwapụ aghụghọ nke ịntanetị na-agwa ndị mmadụ n'otu n'otu na ọrụ enyo na-emetụta ha,ekwe ka ha mee ya ngwa ngwa. Onye ọrụ na-ahụ ọrụ ndị ohi na-agbalị ịnweta. Onye na-edekọ akaụntụ, akụ ma ọ bụnhazi setịpụrụ maka oge na otú ọkwa si arụ ọrụ wee rute onye nwe ya. Ngalaba na-eme ka o kwe omume makaòtù iji nyochaa ọrụ. Ọ bụla azụmahịa n'èzí ndị a na-ebute a ngosi. Ọ na-enye onye ọrụ ahụ ka ọ zaghachiha kwadoro ma ọ bụ kwetaghị ọrụ a. Ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ kaadị na-enyere aka igbochi ohi site n'ịhazi onye ọrụnkwuputa. Ụlọ ọrụ ndị a kwadoro ọrụ ọ bụla na-adabaghị na profaịlụ onye nwe. Otú ọ dị, ihe e mere adabere na onye ahịagbalịsie ike ime mkpesa na akụkọ banyere ọrụ enyo.
Ọ bụrụ na ntanetị ịntanetị na-egosi, malite site na ịza ya ozugbobelata ọrụ onye omekome ahụ na akaụntụ ahụ. Na-esote, mepụta ntigbu aghụghọ na ndekọ ego akwụmụgwọ nke weghachite akwụkwọ ọhụụ mgbe ọ bụlae nwere ihe ọhụụ ọhụrụ nke rịọrọ. Rịọ kaadị site na kọntaktị ụlọ ọrụ iji nyocha ma hụ ọrụ ọ bụla a na-apụghị ịmata. Ụfọdụ ụlọ ọrụnye nhọrọ iji weghachite otuto na akụkọ ndekọ ego. Ọ na-egbochi onye nwere ike ịnweta akụkọ ahụ.
Ịkọ akụkọ aghụghọ
Onye na-eme ngwa ngwa na-arụ ọrụ aghụghọ bụ na ngwa ngwa nwere ike ịchịkwaeji ha data. Ịkọ akụkọ banyere njirimara nke njirimara na bureaus beta bụ nzọụkwụ mbụ. Mgbe ngosi, ha na-egbochi ọ bụlaoghere akaụntụ ọhụrụ n'okpuru aha onye ahụ. Nzọụkwụ ọzọ bụ ịmatakwu ndị ọchịchị.
Nke kachasị mkpa bụ ịkpọtụrụ ndị ụlọ ọrụ kaadị akwụmụgwọ. Otu nwere ikegbanwee akụkọ, logins, na okwuntughe. Ọzọkwa, ịkpọtụrụ ụlọ ọrụ ekwentị nwere ike ịrụ ọrụ dịịrị onye nwe ya ka ha nwere ike inye aka gwaonye ọrụ nke mgbanwe ọ bụla. Ha ga-enyere aka na nlekota nke okwu na akụkọ.